I-Raw Pterostilbene Powder (537-42-8) Abavelisi-Phcoker
I-Pterostilbene powder yi-antioxidant ekhoyo ikakhulu kwiiblueberries, iidiliya kunye nentliziyo yomthi wesandwood. Pterostilbene …….
I-Powostilbene powder (537-42-8)
I-Pterostilbene powder e-Raw-stilbenoid eyenziwe ngokwemvelo ehambelana ne-resveratrol, ene-antioxidant, i-anti-inflammatory, pro-apoptotic, i-antineoplastic kunye ne-cytoprotective. Phezu kokulawulwa, i-Raw Pterostilbene powder inomsebenzi wokulwa ne-oxidant ngokurhawula iintlobo ze-oksijeni ezisebenzayo (i-ROS), oko kukuthintela uxinzelelo lwe-oxidative kunye nomonakalo we-ROS. Inokuphinda isebenze i-nrythroid ye-2 ehambisana ne-2 (Nrf2) -yindlela edibeneyo kwaye inyuse imbonakalo yee-enzyme ezahlukahlukeneyo ezinjenge-antioxidant, njenge-superoxide dismutase (SOD). Ukongeza, i-Raw Pterostilbene powder iyakwazi ukuvimbela ukuvuvukala ngokunciphisa imbonakalo yabameli abavuthayo, njenge-interleukin (IL) 1beta, i-tumor necrosis i-alpha (TNF-a), i-nitric oxide synthase (iNOS), i-cyclooxygenase (COX) , kunye ne-nyukliya factor kappa B (NF-kB). Kwakhona kuvimbela okanye kuvimbela ukusetyenziswa kweendlela ezininzi zokungena ezibandakanyekayo kwi-carcinogenesis, kunye nokwandisa ukubonakalisa iintlobo ezahlukeneyo zengcinezelo zegciwane ngexesha lokunciphisa intlungu ethile ekukhuthazeni izakhi zofuzo. Ikwazisa ngqo iipoptosis kwiiseli zesisu.
I-Powostilbene powder (Rax-537-42)uqobo
Igama lemveliso Powostilbene powder
Igama leKhemikhali Powostilbene powder;
Inani leCAS 537-42-8
I molecular Fi-ormula C16H16O3
I molecular WSibhozo 256.301 g / mol
IMasaisotopic Mass 256.11 g / mol
IMisa eyiyo 256.11 g / mol
Aukuguquka I-stilbenoid eyenziwa ngokwemvelo ngokumalunga ne-resveratrol
I powttilbene powder (537-42-8) Inkcazo
I-Pterostilbene yimolekyuli ye-stylbene enemethylated ngokufana nokwakheka kwe-resveratrol. Ngelixa uninzi lwezenzo zezi zimbini zinokuthelekiswa, i-pterostilbene ibonakala ngathi ifunxwe kakuhle ngakumbi emva kokungenisa ngomlomo kwaye inokuba yinto enamandla kakhulu ye-antioxidant kunye ne-anticancer molecule.
Isifundo esinye kuphela esivavanye ipterostilbene powder ebantwini. Ifumene ukonyuka kwe-cholesterol ye-LDL kunye nokuhambela kumanqanaba asezantsi e-HDL kubantu abanamanqanaba aphezulu e-cholesterol abathathe i-100 okanye i-250 mg ngosuku. Kwakungacacanga ukuba ngaba idosi esezantsi ikhokelela ekunciphiseni uxinzelelo lwegazi, kodwa ukunciphisa kwiqela elithathe idosi ephezulu kwakusemandleni.
I-Pterostilbene powder (537-42-8) Indlela yokuSebenza
I-Pterostilbene ilwa nokuxinwa kwe-oxidative ngokubalinganisa i-enzymes e-antioxidant. Yandisa i-superoxide dismutase i-1 (i-SOD1) kunye ne-peroxiredoxin-i-4 (i-PRDX4), ebophezela kwiintlobo ze-oksijeni ezisebenzayo. Abaphandi baye babona oku kusebenza kumaseli esiso lomntu, bacetyisa ukuba i-pterostilbene inokukhusela kumonakalo ochaphazelekayo. Ngaphandle, i-Pterostilbene ibuye isebenzise indlela yokubonakalisa i-SIRT1 ekhusela umonakalo wamaselula. Le ndlela iyakwandisa ukubonakalisa kwe-P53, iprotheni ekhusela i-DNA kwaye ikhusela utshintsho olubangelwa ngumhlaza.
Nangona i-SIRT1 inokukhusela ngokuchasene nokunye ukuguqulwa kunye nomonakalo owenzekayo njengoko sikhula. Nangona kunjalo, i-pterostilbene ayikho ipilisi yamatshini ngokuguga.
Izifundo ezininzi ziye zabonisa ukuba i-pterostilbene iyancipha ukuvuvukala okulawulwa yi-tumor necrosis-alpha-alpha (TNF-alpha). Uxinzelelo oluxhasiweyo lubangela ukuvuvukala; i-pterostilbene ingavimba i-TNF-alpha kunye ne-interleukin-1b (i-IL-1b) ngokunciphisa iintlobo ze-oksijeni ezisebenzayo.
I-Pterostilbene iphinde ivimbe uxinzelelo phakathi kwendawo yamashishini eselula ebizwa ngokuba yi-endoplasmic reticulum, okanye i-ER. Kwisifundo esithile, xa iiseli ezivela kumbindi wegazi zibonakaliswe kwi-pterostilbene, i-ER yabo ayizange iphendule kwiimpawu ezivuthayo, kwaye azizange zitshathwe.
I-Pterostilbene inoluhlu olukhulu lweendlela ezinokuthi zichasane nomhlaza. Inokukhusela iiseli ezisempilweni kwaye ikhethe ukonakalisa iiseli ezinomhlaza. Kwi-glioma (ubuchopho okanye umhlaza womqolo) iiseli, i-pterostilbene yehle i-Bcl-2 kunye ne-Bax eyandisiweyo; olu tshintsho lwonyusa iiseli "zokuzibulala" kwaye lubangele ukuba iiseli ze-glioma zife.
I-Pterostilbene ibonakala ijolise ngokukhethekileyo kwingingqi ye-hippocampus kwingqondo. Kukho, kwandisa ingqondo ye-neurotrophic factor (BDNF), iprotein kinases (activated protein kinase) ye-mitogen, kunye ne-cAMP impendulo ebopha iprotheni (CREB). Ezi ntathu zeprotheni zisiza i-neurons ukuba ikhule, iphindise, iphinde iphendule kwiindawo ezikuyo. I-SNRI i-anti-pressressants often often target these paths. Kwakhona kwi-hippocampus, i-pterostilbene yandisa iprotheni ebizwa ngokuba yi-Nrf2, leyo eyenza ukuba ikhulise iiprotheni ezixhatshazwayo.
I-monoamine oxidases, ii-MAO, ziyi-enzymes eziphula i-neurotransmitters kwingqondo. Enye yezi-enzymes, i-MAO-B, ikhethile i-dopamine ngokukhethekileyo; ngenxa yoko, iziyobisi ezivimba ii-MAO-B ukwandisa i-dopamine kwingqondo. Ngokutsho kokufumanisa kwangoko, i-pterostilbene inhibits u-MAO-B umsebenzi kwaye, ngoko ke, ukwandisa i-dopamine.
I-Pterostilbene powder inokuthintela isifo se-Alzheimer ngokukhusela ingqondo kwi-beta-amyloid (Aβ). Indlela echanekileyo ayiyaziwayo, kodwa ibonakala iquka i-PI3K kunye ne-akt, iiprotheni ezimbini ezixhasa imemori, ukufunda kunye ne-neuron ukukhula.
ukusebenzisa I-Pterostilbene powder (537-42-8)
Iphakanyiswe iPterostilbene powder (537-42-8) Isisombululo
Kubantu, amanani ukuya kwi-250 mg ngosuku ayabonwa njengokhuselekile. Amanani aphakamileyo afana nalawa abonakalisiwe ukunciphisa uxinzelelo lwegazi nokukhuthaza ukulahleka kwesisindo. Amanqanaba e-LDL e-cholesterol akhula ngokukodwa, kodwa le mpembelelo yayinganyelwanga ngokupheleleyo kunye nokudibaniswa kweminye yembewu yamagilebhisi.
Kwizilwanyana, amanani amaninzi aphantsi ayenemiphumo engqondweni. Phakathi kwe-1 kunye ne-2 mg ngekg weesisindo somzimba ngosuku liyanciphisa ukuxhalaba kwiigundane. Ukusebenzisa ukulinganisa okulinganayo kwenzalo phakathi kwamagundane nabantu, i-dose yokuqala (kwi-mg) yomntu yayiza kuba isisindo sayo kwi-kg ehlukaniswe yi-12.3. E sebenza ku:
4.6 mg / usuku lomntu we-125 lb
5.5 mg / usuku lomntu we-150 lb
6.5 mg / usuku lomntu we-175 lb
7.3 mg / usuku lomntu we-200 lb
Ukuba uthatha ipterostilbene powder ngenxa yeenzuzo zayo zokuqonda, unokufisa ukuqala ngeqondo eliphantsi kakhulu. Nangona kunjalo, iziphumo ezinjalo eziphantsi kwezonyango ziye zabonwa kuphela kwiimicebe ngoku, kwaye abantu banokuyonwabela kakhulu inzuzo engqondweni kunye namaqondo aphezulu.
Iinzuzo zePterostilbene powder (537-42-8)
I-Pterostilbene powder yi-antioxidant ekhoyo ikakhulu, ikwanayo ne-chemopreventive, antiinflammatory, antidiabetic, antidyslipidemic, antiatherosclerotic kunye ne-neuroprotective effects. Ngaphandle koko, ikwanazo izibonelelo ezingezantsi:
Unceda ukulwa nomhlaza
Ukuphucula ukuqonda kunye nokuvimbela ukufa kwesisele kwiingqondo
Iyanciphisa i-Blood Sugar
Kwangathi Unokuxhasa Ukulahlekelwa Kwisisindo
Kwangathi Inganda iMpilo